एक दर्जन बैंक मर्जर प्रक्रियामा, विकास बैंकको अस्तित्व मेटिँदै « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
एक दर्जन बैंक मर्जर प्रक्रियामा, विकास बैंकको अस्तित्व मेटिँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान दवाव दिएपछि धेरै विकास बैंक प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका छन । धेरै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुसंग प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा संख्या घट्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको दवावपछि वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्न थालेका छन । विकास बैंकको अस्तित्व विस्तारै सकिने संभावना बढेको छ ।
यद्यपी अझै पनि २८ ओटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि विकास बैंकहरुको संख्या घट्दै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ७६ ओटा रहेका विकास बैंक ५० वटा घटेर २८ वटामा सिमित भएका छन । वाणिज्य बैंकको संख्या २८ छ । ग्लोवल आईएमई र जनता बैंक मर्जरमा जाने सहमति गरेकाले २७ मा झर्ने छ ।
असोज १२ गते एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन । एनएमबीसंग मर्ज गरेपछि ओमको अस्तित्व समाप्त भएको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति (एक्वाएर) गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
एक्वायरपछि गण्डकी विकासको पनि अस्तित्व सकिँदैछ । सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गरेपछि सहयोग विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिने छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले प्राप्ति गरेपछि कैलाश विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिने छ ।
केही वर्षअघि नै पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक र उद्यम विकास बैंक एक आपसमा मर्ज भएर एकिकृत कारोबार गरिसकेका छन । यी दुईमध्ये एक विकास बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ ।
साइन विकास बैंक र रेसुंगा विकास बैंक पनि मर्ज भएका छन । दियालो विकास बैंक र प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट बैंक,अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक र सूर्या डेभलपमेन्ट बैंक र सोसल डेभलमेन्ट बैंकहरुलाई ग्लोवल आईएमई बैंकले प्राप्त गरिसकेको छ ।
सिभिल बैंक र एक्सीस डेभलपमेन्ट बैंक एक आपमा मर्ज भएका छन । विराटलक्ष्मी विकास बैंक र खाँदबारी डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, वागेश्वरी विकास बैंक, पूर्वान्चल विकास बैंक र मध्यमान्चल ग्रामिण विकास बैंकको पनि अस्तित्व सकिएको छ ।
यस्तै किस्ट बैंक र प्रभु विकास बैंक र त्रिवेणी विकास बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा मर्ज भएका छन ।तिनाउ मिशन डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७६ असोज १६ गते प्रकाशित
कारोबारको अन्तिम दिन नेप्सेमा झिनो अंकको सुधार
काठमाडौं । सातामा कारोबारको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा झिनो अंकको सुधार देखिएको
एभरेष्ट बैंकको सीईओमा गजेन्द्र कुमार नेगी नियुक्त
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा गजेन्द्र कुमार नेगी नियुक्त भएका
ल हेर्नुहोस् ! नेपालमै जागिर गरेर दैनिक ५७ हजार तलबभत्ता
काठमाडौं । नेपालमै जागिर गर्नेले दैनिक रु ५७ हजार तलबभत्ता पाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको
बैंकका सिइओको तलब २ करोड ३२ लाख ! सञ्चालकलाई साढे ३८ लाख भत्ता, बोनस कति ?
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को बार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नगद सहित
मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा यस्तो छ तयारी
एनआरएनए निर्वाचन : ११ पदमा निर्विरोध निर्वाचित (नामसहित)
आजदेखि खुलाउँदै छ लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना आह्वानको विज्ञापन,…
अधिकृत पदको लिखित नतिजा प्रकाशन
शिक्षक नियुक्त गर्न स्थानीय तहलाई रोक, यस्तो छ कारण
७ हजार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु ! लोकसेवा आयोगले भोलि…
सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका पालना नगर्ने सहकारीलाई १० लाख जरिवाना
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी कारवाहीमा पर्ने थालेका छन